စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း သန်းချီ ရှိနေ၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် လ? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း သန်းချီရှိနေပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် လုပ်ငန်းရှင်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။ မေ ၁၁ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် CEO Conference 2018 တွေ့ဆုံဆွေး နွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လက်ရှိမှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပြင် အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နည်းပညာတွေကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးချတတ်စေဖို့ အလေးထားဆောင်ရွက်နေပေမယ့် တိုးတက်မှု နှေးကွေးနေတယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း သန်းနဲ့ချီကျန်ရှိနေပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပြီး လိုအပ်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍအတွက် အလားအလာကောင်းများရှိပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီဖြစ်ခြင်း ကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏လယ်ယာကဏ္ဍအတွက် အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ နည်းပညာနှင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေးတို့ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော ဈေးကွက်ရရှိရေးတို့သည်လည်း လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအနေ ဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာစေရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးတို့ကို ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ပြီး စက်မှုဇုန်များကိုလည်း အသင့်ဖော်ဆောင် ပေးထားကြောင်းသိရသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း သန်းချီရှိနေပြီး ယင်းမြေလွတ်မြေရိုင်းများအနက် လယ်ယာမဲ့သူများအတွက် လယ်ယာမြေများ ဖော်ဆောင်ဝေငှ ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လယ်ယာမြေများကို လက်ဦးမှုရယူထားပြီး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကုမ္ပဏီအချို့ ထံမှ လယ်ယာမြေ သိန်းချီ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထား ကြောင်းသိရသည်။ တိုင်းဒေသကြီးတွင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးနှင့်လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၊ ခရီးသွားကဏ္ဍတို့ကို ဦးစားပေးဖော် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ရွှေ၊ သတ္တုလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေလိုကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်က ပြောသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် လူဦးရေ ၅၃သိန်းကျော် နေထိုင်ပြီး ၈၃ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဖြစ်ကာ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယက ပဲစင်းငုံ တန်ချိန်နှစ်သိန်း ဝယ်ယူမည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် ပဲဈေး ခုန်တက်
ဂျပန် အနောက်တောင် ကျူရှူးကျွန်း၌ ရှင်မို မီးတောင် ပေါက်ကွဲ
နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်များ ညီလာခံတွင် ရခိုင်အရေး အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်၏ ဆောင်ရွက်မှုကို တင်ပြမည??
ဗိုလ်ချုပ် အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းရေးသားမှု သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မပြီးစီးခဲ့ခြင်းကြောင့်